စိုင်းစိုင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: Creating strong passwords
Password တည်ဆောက်ရာမှာ အခြေခံကျပြီး မှတ်သားရ လွယ်အောင် နည်းလမ်းကောင်း လေး စဉ်းစားထားတာပါ။
four, for, fore =4
two, to, too= 2
ဥပမာ ။ Are you happy today? ကိုပြောင်းရေးမယ်ဆိုရင် Ru:-)2d?
When you say nothing at all ကိုပြောင်းရေးမယ်ဆိုရင် Wu5n9@A
Posted by Sai Sai at 11:33 AM
မဖြစ်စလောက် passwords အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Good luck for your Pa Par
Checking PC properties using CPU-Z
Way to my hometown